ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစပျစ်သီး Stores ဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစပျစ်သီး Stores ဘာတွေလဲ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/09/2020)
ဘယ်အချိန်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်၏ search အတွက်, သငျသညျသူတို့အား timeless အပိုင်းပိုင်းများအတွက်မြျှောအပေါ်မသာနေ. သင်တို့သည်လည်းမှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်းခရီးကိုယူပြီးနှင့်သမိုင်းရှာဖွေစူးစမ်းနေ. တစ်ဦးကစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်တစ်ဖက်ရှင်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည် ပြတိုက်, မြို့တမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း၏ညွှန်ပြ. ကျနော်တို့ရထားအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြို့ကြီးများရှာဖွေစူးစမ်းကိုချစ်, နှင့် ထူးခြားတဲ့ရှာတွေ့ နှင့် timeless အဝတ်အစားကလုပ်နေတာတွေထဲကပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဤတွင်များမှာ အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးဥရောပ၌စတိုးဆိုင်များနှင့်မည်သို့ရထားသဖြင့်ထိုအရပ်၌ရဖို့.
ဥရောပပဲရစ်အတွက်အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးစတိုးဆိုင်များ: အခမဲ့ P ကိုစတား
ဥရောပ၏ဒုတိယအများဆုံးသွားရောက်ခဲ့မြို့တော်အဖြစ်, ပဲရစ် အလွန်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်လက်လှမ်းမီ. ခရီးသွားများအတွက်ကဲ့သို့သောအများဆုံးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကနေရထားနဲ့အလွယ်တကူပဲရစ်မှရနိုင် ဘယ်လ်ဂျီယံ, စပိန်, ဟော်လန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ဂျာမနီ, SaveATrain သုံးပြီးအခြားသူတွေအကြား.
သင်ရထားချွတ် hopped င့်ပြီးတာနဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမှတ်တိုင်အခမဲ့ P ကိုစတားမှဖြစ်လိမ့်မယ်. အကယ်., ငါတို့လို, သငျသညျ retro ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ဦးကိုနှစ်သက်နေ, ထို့နောက်ဥရောပ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်ရန်မ jaunt ဟာအံ့ဩဘွယ်သောဖရိုဖရဲတစ်မှတ်တိုင်မပါဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မည် အခမဲ့ P ကိုစတား. ပဲရစ်အခြားစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်များမတူဘဲ, FREE'P'STAR ရုံပြင်သစ်ဒုတိယ-လက်အဝတ်ရောင်းပါဘူး. သူတို့ကဟောင်းအဝတျကိုကနေဖန်ဆင်းတော်ပင်အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းများလွန်းခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်ဒုတိယ-လက်အဝတ်ရောင်း. အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းပျစ်သီးအဝတ်အစားနှင့် 70 ကနေ accessories များကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးရှိပါတယ်’ လက်ျာဘက် 21 ရာစုမှတဆင့်.
ဘာလင်အတွက်အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးစတိုးဆိုင်များ: သီချင်းဆို Blackbird နဲ့
သင်လုပ်နိုင်သည် အားလုံးလမ်းညွန်ထံမှဘာလင်ရောက်ရှိ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်း InterCityExpress အသုံးပြု., အချင်းချင်း, EuroCity, နှင့် InterRegio ရထား. အသစ်ဗဟိုဘူတာရုံ ဘာလင် Hauptbahnhof ဘာလင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 2006 နှင့်ဘာလင်အတွက်ရထားလမ်းနှင့်ဘူတာအသစ်တစ်ခု concept ကို install လုပ်ထားခဲ့သည်. အားလုံး မီးရထားဘူတာ ယင်းကိုကောင်းစွာချိတ်ဆက်များမှာ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လမ်းလည်းမရှိအောင် စူပါလွယ်ကူပါတယ်, နှင့်တတ်နိုင် သငျသညျသင်တန်း၏ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားသုံးနေတယ်ဆိုလျှင်.
ပဲရစ်ဥရောပမှာအများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုသောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ကျနော်တို့ဘာလင်ဥရောပအတွက် swankiest လမ်းပေါ်စတိုင်အချို့မှနေရာဖြစ်သည်ထင်. ထို့နောက်အံ့သြစရာမရှိပါင်, ဘာလင်၏အချို့နှင့်အတူ brimming ကြောင်း ဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်သီးစတိုးဆိုင်များ. ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ သီချင်းဆို Blackbird နဲ့. ၏ arty ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည် Neukolln ဒုတိယလက်ဆိပ်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုအထူးပြုတဲ့ကဖေးနဲ့အတူစပျစ်သီးကိုအဝတ်၎င်း၏အမျိုးစုံရစုဆောင်းခြင်းပေါင်းစပ်. ကျနော်တို့ကဒီကတကယ့်အစွန်နှင့်နေဖို့ပိုပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးသည်ခံစားရနှင့် ဆိုင်, စား! ဒါဟာ 70 ကနေဒီဇိုင်နာကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်တံလျှပ်ရှိပါတယ်’ 90 ကျော်မှ’ အဖြစ်အရသာရှိတဲ့လက်ဖြစ်ရယူထားသော, သီချင်းဆို Blackbird နဲ့ အားလုံးအစားကောင်းကြိုက်သူများဖက်ရှင်တစ်ခုဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်!
ပထမဆုံးတွေ့ကြုံနေဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမနေပါနဲ့. ဤသည်ဆိုင်ပြင်ပကနေအလွန်သေးငယ်သောကြည့်, သင်မူကားတံခါးမှတဆင့်လမ်းလျှောက်တစ်ချိန်က, သငျသညျလိမ့်မယ် အတှေ့အကွုံ ပဉ္စလက်ကိုချက်ချင်း. သင်၌အကြီးဆုံးဒုတိယ-လက်စတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် အမ်စတာဒမ် နှစ်ခုလိုဏ်ဂူကြမ်းပြင် featuring စပျစ်သီးကိုအဝတ်အစားအပြည့်အဝပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းထံအပ်နှံနေတဲ့ထပ်ခိုးအဆငျ့ဖွငျ့ကွဲကွာ.
စတိုးဆိုင်အမြဲ restocks နှင့်လတ်ဆတ်သောသစ်သောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်. ယင်း၏ရွေးချယ်ရေးခေတ်ပြိုင်ဖက်ရှင်များ၏ဆုတ်ယုတ်-and စီးဆင်းမှုနှင့်အတူလှုံ့ဆျောသော်လည်း, ဇိပက် အမြဲထိုကဲ့သို့သောဂျင်းဘောင်းဘီအဖြစ်အမြဲစိမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတူကောငျးအလှနျက၎င်း၏စင်ပေါ်စောင့်ရှောက်, တပ်မတော်အကျီ, နှင့် flannel ရှပ်အင်္ကျီ.
ဘာစီလိုနာအတွက်အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးစတိုးဆိုင်များ: နှင့် Swing
Catalonia ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ်ထွက်ရပ်နေ, ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ Avant-garde နှင့်ရသေးသြဇာခံစားရှိပါတယ်. ခေတ်မီအဆောက်အဦးများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အလယ်ခေတ်အဆောကျအအုံ, ဖန်တီးမှုအစားအစာ, နှင့် ပေါ်လာတွေက. ဘာစီလိုနာထိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် ဥရောပခရီးသွားနေရာများ. ငါတို့သည်သို့သွားကြသည်ကတည်းက နွေရာသီ, ဒါကြောင့်စူပါအလုပ်များရဖို့အကြောင်းကိုဖွင့်. ဒါကြောင့်သင်သေချာအောင် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် အစောပိုင်း SaveATrain အပေါ်. မသာဘာစီလိုနာ၏အချို့မှနေရာဖြစ်သည် ဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်သီးစတိုးဆိုင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းလူကြိုက်အများဆုံးနွေရာသီ၏တဦးတည်းရဲ့ အားလပ်ရက်များ ခရီးစဉ်. အရသာအစာစားခြင်းအကြားမှာတော့ Tapas နှင့်အများအပြား၏တဦးတည်းအပေါ် tanning ကမ်းခြေ, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်ယူ နှင့် Swing. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စပျစ်သီးကို Boutique ဟာခေတ်မှီမွေးဖွားခဲ့ပြီးဧရိယာ၌တည်ရှိသည်. လက်ကိုရှေးခယျြဒီဇိုင်နာအဝတ်နှင့်ပြည့်စုံ, အိတ်, လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဖိနပ်, ဒီ snazzy စတိုးဆိုင် 20 ရာစုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဆယ်စုနှစ်ကနေစပျစ်သီးကိုခါးပန်းကို stocks.
ဇိမ်ခံသင့်ရဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာပါတယ်. နှင့် Swing Chanel ကနေ retro အပိုင်းပိုင်း features, Yves Saint Laurent, နဲ့ Christian Dior, သငျသညျအခြို့သောထိုးသွင်းချင်တယ်ဆိုရင်သူကစျေးဝယ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာအရပ်အောင် pizzazz သင့်ရဲ့ဗီရိုယခုရာသီသို့.
ဂျီနီဗာ: အဆိုပါ VET '' ဆိုင်
ဂျီနီဗာထူးခြားတဲ့ setting ကိုမှအိပ်မက်မြို့ကျေးဇူးတင်စကားနှင့် Mont-Blanc ၏ခမ်းနားအမြင်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပတိုက်တွင်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်. အဆိုပါ ကျေးလက်, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်, သာမိနစ်အနည်းငယ်ကွာမြို့မှဖြစ်ပါတယ်. ဂျနီဗာ၏ကျန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံး စတင်. ပွိုင့်ဖြစ်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန် ရထားကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး connection ကိုကျေးဇူးတင်.
သငျသညျစဉ်းစားစေခြင်းငှါ .... ဒါကကောင်းတဲ့အချက်အလက်အပေါင်းတို့နှင့်င်, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာအဝတ်အစားတွေမှာ, မိန်းကလေး?! ငါသိတယ်, ဂျီနီဗာတစ်စှဲခြှတောမြို့အဖြစ်လူသိများမည်မဟုတ်ပါ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုရရှိပါသည်ဘာဖြစ်လို့သို့သော်င်. ထွက်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် သင်ဤကြိုက်တယ်များအတွက်. သူတို့အသက်ဝိညာဉ်ရောင်းဖို့မလိုဘဲ၎င်းတို့ပျစ်သီးဂိမ်းဖွင့်ကြည့်ငွေသားတင်းကျပ်စွာခရီးသွားများအတွက်, အဆိုပါ VET '' ဆိုင် ဂျီနီဗာရှိ ရှေ့ဆက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်!
ဆွစ်ကြက်ခြေနီ၏တစိတ်တပိုင်း, စပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်က၎င်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆိုင်များထက် orientated ပိုပြီးဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသီးသန့်ထိုကဲ့သို့သော Givenchy နှင့် Celine အဖြစ်အထင်ကရအမှတ်တံဆိပ်ထဲကနေလက်ကောက်ယူ retro အဝတ်အစားရောင်းချ. ဒါကြောင့်, သငျသညျကျင့်ဝတ်ဘို့ဒုတိယ-လက်ဖက်ရှင်တစ်ဦးကိုနှစ်သက်နေသလားဆိုတာကို, နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်တွေ, ထွက်ခွာသည် အဆိုပါ VET '' ဆိုင်. အဆိုပါရရှိသောလိုအပ်နေသူများကူညီပေးနေဆီသို့ဦးတည်သွားရပေမယ့်လည်းဆွစ်ဇာလန်မြို့ကောင်းကင်ပြာ-ဈေးနှုန်းမြင့်မားဖို့ကြိုဆိုအခြားရွေးချယ်စရာမယ့်မသာ!
Zurich to Geneva မီးရထားလက်မှတ်
တစ်ဦး snazzy သစ်ကိုဗီရိုများအတွက်အဆင်သင့်? အဝတ်အဘို့သင့်ငွေကို Save နှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင် SaveATrain. အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခနှငျ့သငျလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင်ရ! 😎
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-vintage-stores-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml သင် / nl မှ / fr ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.